Fotoam-pialan-tsasatra : mampianatra « cirque » ny Chapitô Metisy | NewsMada
Fotoam-pialan-tsasatra : mampianatra « cirque » ny Chapitô Metisy
Nanomboka, ny asabotsy teo, misokatra ny fanofanana sy fampianarana « cirque » ho an’ny ankizy sy ny tanora, etsy amin’ny Chapitô Metisy etsy Mandialaza Ambatomitsangana. Ity toerana ity izay sekoly efa zatra mifanerasera amin’ny ankizy sy efa mpanofana ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana.
Mandritra ity volana aogositra ity ary isaky ny asabotsy ny fiofanana. Tanjona amin’izany ny hampivelatra ny ankizy amin’ny lafin-javakanto hafa, ankoatra ireo efa mahazatra azy any an-tsekoly, toy ny hira sy ny dihy ary ny fitendrena zavamaneno. Eo koa anefa ny fampidirana tsikelikely ny hoe zavakanto an-dalambe, anisan’ny malaza sy ankafizin’ny tanora amin’izao fotoana izao. Manampy izany rehetra izany ny fitaizana ny ankizy hifanerasera amin’ny sokajin’olona samihafa.
Fa ankoatra ny « cirque », marobe ny foibe ara-kolontsaina manoka-baravarana ho an’ny ankizy sy ny tanora amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Ao, ohatra, ny fianarana teatra, ny karazana dihy (dihy ankehitriny, « danse de salon », sns). Ankoatra ny zavakanto, azo atao tsara koa ny mampitombo fahalalana mikasika ny kolontsaina sy ny vakoka, amin’ny alalan’ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara eto an-dRenivohitra sy ny manodidina.